Muqdisho:-Hay’adda Culumada Soomaaliyeed ayaa bayaan ka soo saartay go,aankii dowlada mareykanka ay Qudus ugu aqoonsatay caasimada yahuuda xooga ku heystay dalka Falastiin waxaana ay Hay’adda Culumada Soomaaliyeed ugu baaqday Muslimiinta in ay garab istaagaan shacabka falastiin.Bayaanka oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray Halgan.net ayaa sidan u qornaa.
Hay’adda Culumada Soomaaliyeed waxay isha ku haysay kana fajiciyay go’aanka dowladda maraykanka ay ku dhawaaqday oo ah in magaalada barakaysan ee Qudus ay tahay Caasimadda Dowladda Yahuudda. Marka Hay’adda Culumadu, ayadoo gudanaysa waajibka ka saran difaaca diinta iyo dhulka muslimiinta , waxay caddaynaysaa:
1-Waxay aad u cambaaraynaysaa go’aankaas dulmiga ku dhisan , oona dhaawacaya
dareenka malaayiinta muslimiinta ah. waana go’aan aan loo meel dayin , oona khilaafsan
xitaa go’aamada ka soo baxay golayaasha UNta iyo kuwa la midka ah.
2-Go’aankaas wuxuu soo kordhin karaa, kaliya, dhibaato hor leh oo meelo badan gaaraysa , wuxuuna shidayaa dab dad badan ku guban doonaan.
3-Khilaafka iyo tafaraaruqa muslimiinta ayaa sahlay oo sallaxay in go’aankaas la gaaro , ninkii ishiisa laga arko ayaa ushiisa lagu garaacaa, marka ha la midoobo hana lagu toosnaado diinta si haybad iyo sharaf loo helo .
4- Waxaan ugu yeeraynaa dowladaha muslimka ah in ay jawaab adag ka bixiyaan go’aankaas , aynaa si dhab ah u garab istaagaan shacabka Falasdiin.
Sidoo kale waxaan ka dalbanaynaa golayaasha caalamiga ah in ay ka horyimaadaan go’aankaas khatarta ku ah xoogaagii ka haray nabadda adduunka.
Golaha fulinta Hay’adda culumada soomaaliyeed